sawehlor: PEEKABOO ပို့စ်ခေါက်နည်း - ညီနေမင်း (နည်းပညာ)
အပေါ်က စာလုံးအနီပြထားတဲ့နေရာမှာ မြန်မာလိုလဲ အစားထိုးလို့ရပါတယ် .
Read More နေရာမှာ ဆက်လက်ဖတ်ရှု့ရန် (သို့) သင်ကြိုက်နှစ်သက်ရာ
Thank နေရာမှာ ကျေးဇူးတင်ပါတယ် (သို့) သင်ကြိုက်နှစ်သက်ရာ ကိုပြောင်းနိုင်ပါတယ် .
(၇) အပေါ်ကလို ပြန်ပြင်နေရမှာ ကြောက်နေရင် အောက်ကတစ်နည်းနဲ့ စမ်းကြည့်လိုက်ပါ ..
<b:includable id='post' var='post'> နှင့် <div style='clear: both;'/> <!-- clear for photos floats --> </div> ကြားထဲမှာ ရှိတဲ့ စာသားတွေအကုန်လုံးကိုဖျက်ပြီး အပေါ်က ပေးထားတဲ့အတိုင်း အစားထိုးလိုက်ရင်လဲဖြစ်ပါတယ် ....
(၈) အားလုံးပြီးသွားရင်တော့ Setting >> Formatting Tab ကိုသွားပြီး Post-Template နေရာမှာ အောက်က မှင်နီနဲ့ ရေးထားတဲ့ စာသားလေးများကို ရိုက်ပါ။
(၉) ပြီးတာနဲ့ Save လုပ်ပါ။
ပို့စ်တင်တဲ့နေရာမှာ ကိုက တစ်ခု သိထားရမှာရှိပါတယ် .Type your summary here. ဟာ နိဒါန်း တစ်နည်းအားဖြင့် ပို့စ်တင်တဲ့အခါမှာ ပြထားမယ့် စာအနည်းငယ်ပါ ..
Type the rest of your post here. ကတော့ ကျန်တဲ့ စာအကုန်လုံးကို ရိုက်ထည့်ရမှာပါ .. အဆင်ပြေမယ်လို့မျှော်လင့်ပါတယ် .
Source : ညီနေမင်း (နည်းပညာ)
Posted by saw ehlor at 07:44